बीबीएस प्रथम बर्षमा समिताले नेपाल टप गरिन ! » बुद्ध भूमि नेपाल
Home/शिक्षा/बीबीएस प्रथम बर्षमा समिताले नेपाल टप गरिन !
यो नेपालकै सर्वोत्कृष्ट अंक भएकाले ढुङ्गेल नेपाल प्रथम भएको लिवर्टी कलेजले दावी गरेको छ । बीबीएस प्रथम बर्षका बिद्यार्थी मध्ये सबैभन्दा धेरै अंक ल्याउँदै समिता नेपाल प्रथम भएको लिवर्टीका क्याम्पस प्रमुख हिमसागर कार्कीले दावी गरे । ‘हामीले काठमाडौं, बिराटनगर, पोखरा लगायत क्षेत्रका धेरै कलेजहरुमा बुझ्यौ ।
तर, ८० प्रतिशत कटाउँने विरलै छन् ।’ क्याम्पस प्रमुख कार्कीले भने–‘हामीले हालसम्म बुझे अनुसार समिताले भन्दा बढी अंक कसैले पनि नल्याएकाले समिता नेपाल टप भएको हाम्रो दावी हो ।’
समितासँगै लिवर्टी कलेजमै अध्ययनरत सरद तितुङले पनि ८१ दशमलव ४ प्रतिशत र सविता पौडेलले ७८ दशमलव ८ प्रतिशत अंक ल्याएका छन् । राजधानीदैनिक बाट
१० आश्विन २०७७, शनिबार १७:३५